Shiinaha Flat sagxadda & Warshad Boorsada Istaag iyo soo saarayaasha | Hong Bang
Marka la isku daro astaamaha ugu wanaagsan ee Quad Seal iyo Istaagista Boorsada, Bacda hoose ee Flat (sidoo kale loo yaqaan Box Pouch) waxay leedahay rafcaan sare oo shelf ah, iyadoo la kordhinayo labada shelf iyo baakadka lagu xirxiro guska hoose ee qaabka kartoonka ah. Dambiisha Hoosta Flat waxay u oggolaaneysaa buuxinta dusha sare ee fudud waxayna ku habboon tahay noocyo kala duwan oo codsiyo suuq ah, laga bilaabo cuntada badda, kafeega, iyo muusli, illaa cuntada xayawaanka iyo wax soo saarka beeraha.
Astaamaha hoose ee Flat & Bag istaaga
Nalalka adag ee adag ayaa bixiya qallafsanaanta ugu fiican ee awoodda is-taagnaanta kaamil ah.
Noocyada badan ee loo yaqaan 'gussets' ayaa u oggolaanaya sumcadda lagu daray iyo meel naqshadeynta ah.
Qaabka u eg sanduuqa ayaa bixiya ka faa'iideysiga meel sare, labadaba shelf iyo rarka.
Waxaa ku jiri kara astaamo gaar ah oo kala duwan, sida jiinyeeryada hore ee dib-u-soo-kabashada, tufaaxyada, nabaro fudud-jeexitaan, dhibcaha laser-ka iwm.
Guryaha Bacda hoose ee Flat
Bacda hoose ee fidsan waxaa laga soo saaray dhowr lakab oo ah walxaha carqaladeeya kuwaas oo loo kala saari karo 3 kooxood oo waaweyn, kuwaas oo isu taga si ay u siiyaan boorsada astaamo cimri dherer leh oo daloolin kara. Saddexdaan kooxood waa:
Cuntada xayawaanka loo yaqaan 'Pet food Stand Up Pouch' waxay sidoo kale u oggolaaneysaa astaamo la beddeli karo sida jiinyeerrada, godadka sare, jeexjeexa jeexjeexa iyo daaqadda si kor loogu qaado waxqabadkeeda
Hore: Bacda hoose ee fidsan
Xiga: Boorsada hoose ee Flat Waraaq